Shocking :Girl Relates Chilling Details Of How Her Mother Hanged Herself – ZimEye
Shocking :Girl Relates Chilling Details Of How Her Mother Hanged Herself
In a horrible incident, a 10 year-old girl from Chirongoma Village, a stone throw away from Lake Mutirikwi in Chief Mugabe’s area had the agony of watching her mother tie a rope around her neck before hanging herself from a tree.
“Mama vakasvuvura gavi, vakazvisunga muhuro. Vakabva vakwira mumuti murefu vakasungira gavi riya pamuti ndokubva vazvirembedza.
Vakatanga kukava-kava vakaita weti. Ini ndaingochema ndichidaidza vanhu. Vanhu vakazouya vakandiudza kuti mama vako vatofa (My mother got a fresh tree bark and tied it around her neck. She climbed up a very tall tree and tied the bark to the tree branch. She then jumped off from the branch and dangled in the air and kicked around as she tried to remove the bark from her neck. She passed urine and I was crying out for help until some villagers came and told me that my mother was dead,” said the juvenile.
Mbuya Jaricha said her daughter’s death pained her so much that she feels like dying.
She however, said what made the death worse is that Ellen committed suicide while her own little daughter watched.